Paingotra: Iza no tena poeta? Iza no mpanoratra? — Tsara Soratra
Paingotra: Iza no tena poeta? Iza no mpanoratra?
Misy ve ny olona teraka ho mpanoratra?
Ny poeta dia ireo manambara ny fihetseham-pony sy ny fihetsehan-tsainy ary ny fiontanam-panahiny ho fanta-bahoaka, ankoatra izay dia toy ny olona rehetra ihany izy. Azo heverina ho poeta avokoa ny olona rehetra saingy izay manan-talenta hanoratra sy haneho ampahibemaso izay mitranga ao aminy ihany no tena poeta.
Singa lehibe manavaka ny poeta amin'ny olon-tsotra io talenta io , satria na hampianarina ny tetika sy ny paika rehetra ahafahana manoratra aza ny olona iray dia sarotra ho azy ihany ny hanoratra sorakanto raha tsy ao aminy ny talenta. Mety hahavita tononkalo vitsivitsy ny olona iray nampianarina tekinika sy paika enti-manoratra saingy tsy hahatozo amin'izany izy raha tsy eo ny aingampanahy sy ny talenta handevilevy azy.
Toy izao no voalazan'ilay mpandinika iray izay: " Ny aigam-panahy no hery manentana ny famoronana. Ny talenta no fitaovana entina manatontosa sy mandavorary azy. Ny. Vetsovstsom-po aman'eritreritra no akora nahodinkny mpanoratra ka tonga zava-kanto ny literatiora"
Ranoe: RAkotomahafaly NOrbert Eugene manoratra tononkalo, sombin-tantara, tantara fandefa amin'ny radio, famotopotoran-kevitra, nitarika voalohany ny riankalo ary namorona io voambolana io, namorona ny gazety Ambioka hany gazety literera mandeha singa misy eto Madagasikara, mpanao velakevitra literera manerana an'i Madagasikara, mpikabary, mpanao gazety, mpampianatra taranja Malagasy
Posted in fakafaka, paingotra
tagged with fakafaka, paingotra